Umbono: Ukushadela emafulethini | News24
Umbono: Ukushadela emafulethini
Durban - Kwenzeka kanjani ukuthi umshado ungaphumeli eKhaya, kodwa uphumele kwezinye izindawo njengasemqashweni osemadolobheni, yize ninalo ikhaya nobabili ningabashadikazi?
Kubikwa kubani efulethini ukuthi usuyaphuma uyogana?
Mandla Ngubane: Ubaba nomama bahlangana edolobheni baze bathola abantwana bangaphinde balibhada lapho bezalwa khona. Yingakho kunje futhi bobabili abazali ngabe abomfana noma intombi abazilutho ngomnsamo nangokuthemeleza.
Shlengile Maphumulo: Uzoba umfazi wephepha lowo kanti nakamkhwenyanya amadlozi akhona azozibonela intombi ekhwishizela egcekeni. Umuntu kumele akhishwe ngembuzi kubo bese amukelwa ngembuzi futhi kamkhwenyana. Loyo futhi wembuzi kuphela usuke engakapheleli mengacoliwe.
Sizwe Dlamini: Asiyibeke icace leyo akuwona umshado benze iphutha babiza enye into ngomshado cha akusiwo umshado futhi nathi asingabi salifaka elomshado ngoba kuhluke kakhulu nomshado kakhulukazi uma ungumuntu omnyama.
Nontokozo Simelane: Kusuke kungesiwo umshado lowo basuke bezidlalela ngemali yabo labobantu ngaphandle uma kungumuntu ongenalo ikhaya owalahlwa abazali engabazi ukuthi bangakuphi kodwa onekhaya usuke esadlala.
Debac Dalisu Maphanga: Umshado isimiso sikaNkulunkulu, lapho ababili bevumelana kuqala ngokuba ndawonye impilo yabo yonke, bese beya kubazali nalo mbono uma abazali bebavumela bese beya kumbusi wezwe yena ebambisene nenceku kaNkulunkulu uma uMbusi wezwe ebavumela naye inceku kaNkulunkulu ibe isibabusisa sebeshadile. Okunye okungekho kulokhu engikushilo kuyimiso zabantu. Khethani-ke ukuthi nikhetha ukulalela uNkulunkulu noma izimiso zabantu.
Londie Nzaca: Asikholelwa entweni eyodwa, mawubiza amadlozi akini akusho ukuthi nabanye kumele bewabize, abanye ithemba labo likuJehova ongadingi msamu. Masingagxekani yenza okthandayo uyeka abanye.
Jabu Ngubane: Ngiyezwa uma bethi uNkulunkulu ukhona yonke indawo, yebo kunjalo. Bona abazali bayazi nje? Uma bazi kulungile. Amasiko noma cha, akungabikho okhalayo. Umbhalo uthi: Hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zande ezweni. Uma senza izinto asiqaphele singenzi abantu bagxeke insindiso kube kungeyona ethe asenze kanjalo.